Warar - Istaraatiijiyad wax ku ool ah oo lagu dhisayo tiyaatarka guriga
Ciyaaryahan karaoke oo dhan-ah
Wireless / Fireed Mic
Qalabka DVD / CD
Waxyaabaha Karaoke suite
Istaraatiijiyad wax ku ool ah oo loogu talagalay sameynta tiyaatarka guriga
Markii dhaqaalaha bulshadu galo marxalad horumar deg deg ah, qoysas badan oo reer magaal ah ayaa diyaar u ah inay filimada ku daawadaan guryaha, taas oo ka hortagi karta saxmada taraafikada magaalada maalmaha fasaxa ah waxayna si xor ah ugu raaxeysan karaan filimka qoyska iyo carruurta. Sidaa darteed, sameynta hoolka filimka iyo telefishanka ayaa noqotay doorashada keliya ee dad badani ku qurxiyaan guryahooda cusub. Laakiin maxaa yeelay dhismaha hoolka filimka iyo telefishanka wuxuu u baahan yahay aqoon badan oo acoustics xirfad leh, dad badan ayaan ku dhicin inay si fudud u tijaabiyaan. Istaraatiijiyadda ay soo diyaarisay Bian Xiao waa mid fudud oo fudud oo la fahmi karo, fudud oo wax ku ool ah, waadna ku guuleysan kartaa adiga oo la xiriira shirkadda filimka iyo telefishanka.
1. Si loo sameeyo hool filim iyo telefishan, ma loo baahan yahay oo keliya in la tixgeliyo miisaaniyadda? (Tayada miisaaniyada waxay ubaahantahay cabir banaan)
Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira noocyo maqal oo guryo ah oo suuqa yaalla, oo leh qiimayaal kala duwan iyo tayo kala duwan, taas oo dhaldhalaalaysa isticmaaleyaal badan oo ku habboon dhisidda hoolalka filimada iyo telefishanka. Sidaa darteed, Bian Xiao wuxuu soo jeediyay in miisaaniyad u sameynta naftiisa ka hor ay waqti badan badbaadin karto, haddaba maxaa la gudboon miisaaniyadda? Labada qodob ee soo socda lama indha tiri karo:
(1) Waxaad ubaahantahay inaad cadeyso raadintaada tayada filimka iyo istudiyaha telefishanka, shuruudaha loogu talagalay saameynta codka, haddii aad rabto 7.1 stereo ama 7.1.4 dhawaaq dusha sare ah, iyo in tayada sawirku ay raacdo 4K, iwm. waa dhammaan arrimaha go'aaminaya khibradda ugu dambeysa, waxayna u baahan yihiin in si taxaddar leh looga fiirsado;
(2) Waxaad u baahan tahay inaad go'aamiso cabbirka booska oo aad u gudbiso codka adoo riixaya hawada. Baaxada weyn ee filimka iyo hoolka telefishanka, qalabka maqalka oo aad u awood badan ayaa loo baahan yahay si loo hubiyo in cadaadiska dhawaaqa uu gaari karo saameynta ugu fiican iyo inuu hubiyo khibrad daawasho oo qumman.
2. Qol noocee ah ayaa ku habboon filimka iyo hoolka telefishanka? (Qolku waa afargeesle, saami loo baahan yahay in la dheelitiro)
Isku day inaad ka fogaato cabbirka laba jibbaaran ee hoolka filimka iyo telefishanka, oo aad doorato qol leydi ah inta ugu macquulsan Qiyaasta cabirka qolka filimka iyo hoolka telefishanka ayaa xiriir dhow la leh dhibaatada mowjadaha taagan ee soo noqnoqda. Qolka waxaa ku jira seddex nooc oo qaab-dhismeed (resonance resonance), (resonance axial resonance, resonance resonance and oblique resonance). Marka mawjadaha isdabajooga ah ee isdabajooga ah iyo kuwa toosan lagu soo rogo qolka filimka iyo hoolka telefishanka, mowjadda taagan ee qolka si weyn ayaa loo horumarin doonaa.
Waxaa jira tilmaame cilmiyaysan oo sida caadiga ah loo isticmaalo saamiga dhinaca qolka filimka iyo hoolka telefishanka. Iyada oo loo marayo xisaabinta iyo cabbiraadaha xirfadeed ee kala duwan, waxaa lagugula talinayaa in dhererka iyo cabirka cabbirka ee qolka uu u dhexeeyo 1.3: 1 iyo 1.7: 1, dhererka qolkuna waa inuu u dhexeeyaa mitirrada 2.5-4. Isla mar ahaantaana, waa lagama maarmaan in la hubiyo in mugga kursi kasta uu ku dhow yahay 5-8 mitir cubic.
3. Maxay tahay in fiiro gaar ah loo yeesho qaabka naqshadeynta qurxinta ee qolka TV-ga? (Qolka qurxi, u oggolow injineerka maqalka iyo muuqaalka iyo nashqadeeyaha in ay toos ugu wada xirmaan, waa in ay nadiifiyaan miinada)
(1) Meelaha isdaba-joogga ah ee arched, sida domes, saqafka foosto, iwm. Waa in laga fogaadaa qolka gaarka ah ee hoolka filimka iyo telefishanka. Naqshadeynta noocan oo kale ah waxay sababi doontaa diirad saarista acoustic iyo dhibco indho la'aan ah, oo keeni doona saameyn aan laga maarmin;
(2); Ka fogow isticmaalka xad-dhaafka ah ee muraayadaha, marmarka iyo walxaha kale si aad u qurxiso darbiga, maxaa yeelay dusha sare oo siman oo adag ayaa soo saari doona dhawaaq badan oo muuqda, kordhin doona "dib-u-celinta" waqtiga qolka, yareynaya caddeynta codka, iyo kordhinta qiimaha isuduwaha acoustic ee marxaladda dambe ；
(3); Ka fogow darbiyada cad iyo saqafyada cad. Inta badan qolalka tiyaatarka filimku waxay u isticmaalaan qalabka saadaasha inay ku ciyaaraan filimada. Darbiga cad wuxuu ka tarjumi doonaa iftiinka filimka, taasoo sababi doonta wasakhda iftiinka iyo daalka muuqaalka ah marka aad filimka daawanayso;
(4); Hadday hoolku leeyahay laba saf ama in ka badan, sagxad jaban ayaa loo qaabeyn karaa si kor loogu qaado aragtida dhagaystayaasha gadaal loona hagaajiyo tayada codka aagga fadhiga.
4. Sidee loo doortaa sumadda filimka iyo hoolka telefishanka? (Ha isku hallayn indhaha, ha jaban, wax walba waxay ku xidhan yihiin khibrad, wax walba waxay ku xidhan yihiin xirfad-yaqaan)
Waxaa jira noocyo badan oo maqal ah oo lagu dhisay hoolka filimka iyo telefishanka, boqolaal kunna kacaankiiba. Tani waa dhacdo weyn, sidaa darteed waa habka boqornimada ee looga barto istuudiyaha shirkadda filimada iyo telefishanka. Sababta Bian Xiao u soo jeedisay in la doorto astaan ​​caalami ah oo leh taariikh dheer oo uruurinta sumadaha ayaa ah in qalabka maqalka iyo muuqaalka uu yahay qalab farsamo sare leh, soosaarayaashana waxay u baahan yihiin sanado badan oo uruurinta tikniyoolajiyadda iyo cilmi baaris iyo horumarin ah, iyo sidoo kale tayo kaamil ah ka hor iibinta iyo adeegyada iibka kadib. Markii aad tagto dukaamada magacyada waaweyn ku leh adduunka, waxaad lahaan kartaa hal ama xitaa khibrado qoto dheer oo badan waxaadna kala xiriiri kartaa baahiyahaaga dhabta ah lataliyeyaasha iibka ee xirfadlayaasha ah.
Waqtiga boostada: Meey-24-2021
No3,7th, Pingxi Road, Nanping Technology Industrial Park, Zhuhai, Guangdong, Shiinaha
Muuqaalka Miracast, Nidaamka Codka Karaoke, Microphone Karaoke Wireless ah, Karaoke Mikrofoonka La qaadan karo,